अदृश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला त ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय अदृश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला त ?
अदृश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला त ?
सरकारले विदेशी दाताबाट शोधभर्ना स्वरूप लिनुपर्ने ५० अर्बभन्दा बढी रकम नउठ्ने गरी जोखीममा परेको समाचार आएको छ । नेपालका विदेशी लगानीमा निर्माण हुने महत्त्ववाकाङ्क्षी ठानिएका ठूला आयोजना प्रमुखले सम्झौताविपरीत दातालाई बढी खर्च देखाउनाले त्यति ठूलो रकम जोखीममा परेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको योजना बनाउ“दा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरी आयोजना निर्माण गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि विदेशी दातृ संस्थाबाट उक्त खर्चको शोधभर्ना लिने गरिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्दा व्यावसायिक सम्भाव्यता नहुने आयोजना विदेशीसहायता लि“दा भने सम्भाव्य हुने देखेपछि नै विदेशी सहायता लिने हो । तर, यसरी विदेशी सहायताको रकम शोधभर्ना नलिने हो भने त्यो आयोजना स्वदेशी स्रोतबाटै बन्न पुग्छ र त्यो अपव्यय हुन्छ । यसो हुनु भनेको जनताले तिरेको राजस्वको दुरुपयोग हो, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हो । व्यक्तिगत लाभ कसैले नलिए पनि यो ‘भ्रष्टाचार’ नै हो ।
यता सर्वोच्च अदालतले हालै बेरुजूको विषयमा नयाँ नजीर बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नसक्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले हाम्रो ऐन कानूनमा भएको कुरालाई नै व्याख्या गरेर त्यस्तो ठहर गरेको होला । त्यसको अर्थ हाम्रो ऐन कानूनमा भएको व्यवस्था गलत छ भन्ने हुन्छ । महालेखा परीक्षकले पनि त्यस्तो बेरुजूलाई बेरुजू नै भनेर प्रतिवेदनमा लेख्छन् । महालेखा परीक्षकले त्यसमा भएको त्रुटिका विषयमा टिप्पणी पनि उठाउँछन् । तर, यहाँ बेरुजूका नाममा लाखौं करोडौं भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकारी विभिन्न कार्यालयमा जुनजुन कामका लागि भनेर बजेट लिइएको हुन्छ, त्यस्तो बजेट सम्बन्धित काममा खर्च नगरी सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले लाखौं करोडौं रुपैयाँ वर्षौंसम्म सापटी चलाइरहेका हुन्छन्, त्यो पनि विनाब्याज । २/३ वर्षपछि उक्त रकम बेरुजू फछ्र्योट गर्न सा“वामात्र बुझाए पुग्छ । त्यस कारणले पनि धेरै कार्यालयमा बेरुजू देखिएको हो । त्यसरी बेरुजू बसेको देखिएको रकममा भ्रष्टाचार नदेखिए पनि उक्त रकमबाट ब्याज खाएर ती कर्मचारीले फाइदा त लिइएरहकै हुन्छन् । तर, यस्तो खालको अदृश्य भ्रष्टाचारलाई हाम्रो कानूनले अझैसम्म भ्रष्टाचार हो भनेर मानेको छैन । यो हाम्रो कानूनमा भएको त्रुटिको उदाहरण हो ।
सोमवार मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनमा भएका प्रावधानहरू अक्षरशः पालना गर्न सरकारका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको छ । साथै, हालै जारी भएको आर्थिक श्वेतपत्रमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्राथमिकताका साथ ठोस कदम चालिने कुरा उल्लेख छ । यो अभियानको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सबभन्दा पहिले हाम्रो ऐन कानूनमा देखिए भेटिएका कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याउनपट्टि लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्दा व्यावसायिक सम्भाव्यता नहुने आयोजना विदेशीसहायता लि“दा भने सम्भाव्य हुने देखेपछि नै विदेशी
सहायता लिने हो ।